Dutu rine simba rinoparadza misha, rinokuvadza mazana muCzech Republic
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Czechia Breaking News » Dutu rine simba rinoparadza misha, rinokuvadza mazana muCzech Republic
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Czechia Breaking News • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Vanopfuura vanhu zana nemakumi mashanu vanonzi vakakuvara, nepo "mazana" emapurisa uye vekutanga kupindura vatumirwa kumaodzanyemba kweMoravia.
Iyo chamupupuri inogona kunge yaive F3 kana F4 pachiyero cheFujita.
Iyo chamupupuri ingangodaro yaive yakasimba kwazvo chamupupuri munhoroondo yeCzech yapfuura uye zvisingawanzoitika muEurope.
Mishumo yekukuvara uye kukuvara ichiri kuuya.
Chikamu F3 kana F4 chamupupuri chakabatwa pasi mukati Czech RepublicNyika iri mumuganhu weCzech neSlovak, ichikanganisa zvakanyanya kumisha yeMoravia kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweCzechia. Vanopfuura vanhu zana nemakumi mashanu vanonzi vakakuvara, nepo "mazana" emapurisa uye vekutanga kupindura vatumirwa kumaodzanyemba kweMoravia.
Vhidhiyo inotenderera pasocial media yakabata spout ichibata pasi kumwe pakati peBreclav naHodonin, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweCzechia.
Meya weHrušky, uyo ane vanhu chiuru nemazana mashanu, anoti hafu yemusha uyu "wakaparadzwa."
Zviremera zvakafungidzira huwandu hwekukuvara pakati pezana nevanhu zana nemakumi mashanu, asi mishumo yekukuvara nekukuvara ichiri kuuya.
Maererano nechimwe chiteshi cheTV cheCzech, chamupupuri chingave chakange chiri F3 kana F4 pachikero cheFujita, chakayerwa se "chakakura" kusvika "chakakomba" kukuvara. Nyanzvi yezvemamiriro ekunze Michal iták akati "ingangove chamupupuri chakasimba kwazvo munhoroondo [yeCzech] ichangopfuura" uye chisingawanzoitika muEurope.
Vemunharaunda vezvekukurumidzira vayambira vagari kuti vasave panze kana mumigwagwa, uye vakatsanangura mamiriro aya se "dzimba dzakakanganiswa, moto, tsaona dzemumigwagwa, miti pamotokari nedzimba."
Mapurisa eCzech akakurudzira vanhu mumigwagwa kuti "vavhure nzira".
Nguva yekupedzisira dutu rakaonekwa muCzechia yaive Chivabvu 2018. Icho chaive chiitiko cheF0 chakarova mapurazi asina chinhu mudunhu rePlzen, zvichikonzera kukuvara.